स्याङ्जाको बाटोमा पाइन्छ यस्तो मिठो खिर ! यस्तो छ ६१ वर्षिय बृद्धको खिरको ब्यापार(भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > स्याङ्जाको बाटोमा पाइन्छ यस्तो मिठो खिर ! यस्तो छ ६१ वर्षिय बृद्धको खिरको ब्यापार(भिडियो)
admin August 3, 2019 August 3, 2019 भिडियो	0
यात्रा गर्दा अधिकांश ठाउँमा माछा मासुजन्य खानेकुराहरु प्रशस्त पाइन्छ । तर पोखरा भैरहवाको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तरगत गाहा खोलामा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ एक जना कपाल फुलेका बुवाले यात्रुहरुलाई खिर पकाएर राख्नुहुन्छ ।
विगत ५ वर्ष देखि गाहाखोलाका ६१ वर्षिय नुमकान्त पाठकले ग्राहाकलाई सुर्य किचनबाट खिर खुवाउदै आएका छन् । एक प्लेटको ५० रुपैया लिने गरेको नुमकान्त पाठकले बताउनुभयो । छोराहरुको माछामासु पाइने तन्दुरी सिस्टमको व्यवसाय सुर्य किचन नै रहेको छ । आफुले खिरको साथमा परौठा तरकारी लगायत पाइने छ । दिनको सरदर २० प्लेट खिर बिक्रि हुने पाठकको भनाई रहेको छ ।
दैनिक १५ लिटर दुधको खिर बिक्रि गर्दै आएको पाठकले बताउनुभयो । बाटोमा यात्रा गर्नेहरु ६ वर्ष देखिका आफ्ना ग्राहाक रहेको पाठक बताउनुहुन्छ । फोननै गरेर आफ्नो खिरको अडर्र गर्ने र कतिले त घरमा लजाने गरेको उहाँको भनाई रहेको छ । आफुले गरेको व्यवसायबाट निकै सन्तुष्ट रहेको पाठकले बताउनुभयो ।
जहाँ महिलाको ‘लामो कपाल’ हेर्नकै लागि जान्छन् यति धेरै मानिसहरू… ! (भिडियोमै हेर्नुस्)